Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါ တုံ့ပြန်ကိုင်တွယ်ပုံမှာ ချီးကျူးစရာကောင်းကြောင်း IMF အရာရှိပြော
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် Xiangtan ရှိ ဟူနန်သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေ စဉ်(ဆင်ဟွာ) CHINA
“ သူတို့ဟာ ကပ်ရောဂါကို အလွန် ပြင်းထန်စွာ ၊ အလွန်စောလျဉ်စွာပဲ ဟန့်တား ချိုးနှိမ်နိုင်ခဲ့တာပါ” ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ နှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Tobias Adrian ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ CNBC သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် “ ယခင်နှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းကတည်းက ပုံမှန်အနေအထား အဆင့်တစ်ခုကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆို လမ်းပြနေတာပေါ့” ဟု Adrian က CNBC သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ကြီးမားသောအကျပ်အတည်းတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံသည် နဂိုအတိုင်း တစ်ဖန်ပြန်ရောက်ရှိအောင် “အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း” IMF အရာရှိက ဆိုသည်။(Xinhua)
BEIJING, April 8 (Xinhua) -- China's response to the COVID-19 pandemic is impressive, and it has once again fared well inamajor crisis, said an International Monetary Fund (IMF) official on Tuesday.
Photo- A student receivesadose of COVID-19 vaccine atatemporary inoculation site at Hunan University of Science and Technology in Xiangtan, central China's Hunan Province, April 1, 2021. (Xinhua/Chen Zeguo)
Previous Article ပေကျင်းမြို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု မြန်ဆန်စေရေး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရွေ့လျားယာဉ်များ အသုံးပြု
Next Article လက်ဘနွန်နိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး အသုတ်နှစ်သုတ် ရောက်ရှိ